\_'जंगली मान्छे\_'को रुपमा हेरियो\_'
पुस १३, २०७४| प्रकाशित १७:१४
'इकु'को परिचय पाउनुअघि कलाकार सुलेमान शंकरले फिल्म ‘युद्ध’ र टेलिफिल्म ‘थोरै भए पुगिसरी’मा काम गरिसकेका थिए। ‘मेरी बास्सै’मा आएपछि ‘इकु’बाट उनी थप चर्चामा आए। यही नाम, हुलिया र परिचयबाट केही फिल्मसमेत बनाएका उनले फिल्म ‘फिर्के’मा यसपल्ट आफूलाई फरक रुपमा देखाएका छन्। उनीसँग मनोज न्यौपानेले गरेको कुराकानीः
तपाईं ‘इकु’ कसरी हुनुभयो?
धेरैले मलाई ‘इकु’ बनेर अभिनय यात्रा थालेको भन्ठान्दा रहेछन्। इकु बन्नुभन्दा पहिले नै मैले धेरै फिल्म र टेलिफल्ममा अभिनय गरिसकेको थिएँ। एकपल्ट केदार घिमिरे ‘माग्नेबूढा’ र सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ले ‘मेरी बास्सै’का लागि जंगली मान्छेको चरित्र निर्वाह गर्न भन्नुभयो। घर गएँ। जंगली मान्छेको अभिनयका लागि ऐनामा बडी ल्यांग्वेज रिहर्सल गर्दागर्दै अकस्मात् इकु दिमागमा आयो। यो कुरा धुर्मुस र माग्ने बूढालाई सुनाएँ। उहाँहरुले मन पराउनुभयो। त्यसपछि म इकु भएँ।
लामो समय इकु बनिरहन आफूलाई कसरी प्रयोग गर्नुभयो?
म त्यही हाउभाउ र रुपरङले परिचित भइसकेपछि दर्शकहरुले त्यही रुपमा लामो समय हेर्न चाहे। यसका लागि खुबै मेन्टेन गर्नुपर्यो। आफूलाई दुब्लो नराखेको भए इकु होइन मोटाएर पिकु हुन्थेँ होला। घरपरिवारलाई चाहिँ दुब्लो रहेको मन परिरहेको थिएन। ‘मोटाउनुपर्यो, अलिकति बढी खाने गर्’ भन्नुहुन्थ्यो। तर, मोटाएमा इकु नै भइन्नँ भन्ने थाहा थियो। अहिले बल्ल नयाँ भूमिकामा आउने मौका मिल्यो। ‘फिर्के’ बन्नका लागि भने मैले धेरै खाएँ। खाएरै १० केजी तौल बढाएँ।
तपाईं पहिले नै अरुभन्दा फरक देखिनुहुन्थ्यो कि इकु भएपछि अरुले त्यस्तो देखे?
म हेर्दा अचम्म लाग्ने खालको मान्छे होइन। थिइनँ पनि। जंगली मान्छेको अभिनय गर्दा मलाई चिनियो। सबैले आफूभन्दा फरक देखे। त्यसपछि मलाई हेर्न नजर नै जंगली मान्छेको भयो।
तपाईंको करिअरका लागि भने यो पात्र फलिफाप भयो है!
‘मेरी बास्सै’का लागि सिर्जिएको पात्र थियो त्यो। तर, त्यही पात्रले मलाई चर्चित बनायो र यही क्षेत्रमा टिकाइरह्यो। दर्शकको माया पाइरहेँ। फिल्ममार्फत पनि उक्त पात्रलाई देखाएँ। यसपल्ट भने इकुभन्दा केही फरक गर्नुपर्छ भनेर फिर्के भएको छु।
फिर्केको ट्रेलर आएपछि दर्शकको प्रतिक्रिया के छ? के नयाँ पात्रका रुपमा तपाईंलाई रुचाउलान्?
भर्खर म पूर्वमा फिल्मको प्रचार गरेर आएँ। धेरैले फिर्केलाई रुचाउनुभएको रहेछ। उहाँहरुले आफूहरु हलमै गएर हेर्न लालायित रहेको पनि बताउनुभयो। गीतदेखि ट्रेलरसम्म मन पराउनुभएको रहेछ।
फिर्केबाट हिरो बन्ने रहर पूरा गरेको हो ?
हिरोभन्दा पनि एउटा मुख्य भूमिकामा छु भनौं। हिरो भन्नेबित्तिकै भयंकर जिउडाल, हाइट भएको मान्छे भन्ने बुझिन्छ हामीकहाँ। जुन राजेश हमालसँग मात्रै छ। म चरित्र अभिनेता वा म कलाकार हुँ। फिर्केमा त्यही एउटा चरित्र मैले निभाएको छु। म आफूलाई हिरो भन्न रुचाउदिनँ।
‘फिर्के’बाट कस्तो अपेक्षा छ?
उपत्यकाबाहिर त ट्रेलरको असाध्यै राम्रो तारिफ भइरहेको छ। विदेशमा पनि राम्रो भनिरहनुभएको छ। पाँच देशमा त मैले फिल्म बेचिसकेको छु।
यदि इकुको परिचय नबनेको भए के हुनुहुन्थ्यो होला!
म कलाकारितामा संघर्षरत थिएँ। तर त्यसबाट खासै कमाइ भइरहेको थिएन। त्यस्तो समय मलाई परिवारले विदेश पठाउन पासपोर्ट बनाइदिनुभएको थियो। तर, विदेश जानु परेन। इकु हिट भयो। आज त्यही इकुका कारण कामदारका रुपमा होइन, कलाकारका रुपमा विदेश गइरहेको छु।